Ná Me Koko Nye Koraa—Sɛnea Midii Subammɔne So
KENKAN WƆ Abua Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Baoule Belize Kriol Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chol Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Quechua (Cuzco) Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tsonga Tswana Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zulu
“Ná Me Koko Nye Koraa”
Cristóbal Díaz Anom Asɛm
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie “Ná Me Koko Nye Koraa”
Afe a Wɔwoo No: 1975
Ɔman a Ofi Mu: Mexico
Kan No: Ná ne koko nye; wɔde no too afiase
Wɔwoo me San Juan Chancalaito. Ɛyɛ kurow ketewa bi a ɛwɔ Chiapas mantam mu wɔ Mexico. M’abusuafo yɛ Cholfo. Wofi Maya abusuakuw mu. M’awofo woo mma 12, me na na meto so nnum. Bere a na meyɛ abofra no, Yehowa Adansefo ne me ne me nuanom suaa Bible. Awerɛhosɛm ne sɛ, mamfa Bible afotu ammɔ me bra wɔ me mmeranteberem.
Bere a midii mfe 13 no, na menom nnubɔne, na na miwiawia nkurɔfo nneɛma. Saa bere no na mitu fii fie, na na mentena faako. Bere a midii mfe 16 no, mekɔyɛɛ adwuma wɔ wii afuw bi mu. Midii bɛyɛ afe baako wɔ hɔ, na da koro anadwo bi, yɛde wii bebree guu hyɛmma mu sɛ yɛde rekɔ baabi. Ɛhɔ ara na nkurɔfo a wofi kuw bi a wɔn nso di nnubɔne ho gua a wokurakura atuo bɛtow hyɛɛ yɛn so. Mihuruw tɔɔ asubɔnten no mu dɔɔ asukɔ guare kɔɔ akyiri kopuee anafo, enti atuo a wɔtotowee no bi anka me. Ɛno akyi no, miguan kɔɔ United States.
Bere a mewɔ United States no, mekɔɔ so tɔn nnubɔne, na mefaa ɔhaw pii mu. Midii mfe 19 no, wɔkyeree me de me too afiase. Wɔbɔɔ me sobo sɛ mabɔ korɔn, na afei nso anka mepɛ sɛ mikum obi. Bere a meda afiase no, mede me ho bɔɔ basabasayɛfo kuw bi, na midii awurukasɛm foforo pii. Ɛno nti, afiase ahwɛfo no de me kɔtoo afiase bi a wɔabɔ ho ban yiye wɔ Lewisburg, Pennsylvania.
Bere a meda afiase wɔ Lewisburg no, me suban sɛee koraa. Ná mayɛ tattoo agu me ho a ɛkyerɛ sɛ meka basabasayɛfo kuw bi ho; ná saa kuw no bi wɔ afiase hɔ, enti ntɛm ara na mede me ho bɔɔ wɔn. Mede me ho hyɛɛ basabasayɛ mu kɛse, na daa ntɔkwaw ara na na meko. Da bi, bere a na basabasayɛfo bi reko wɔ afiase hɔ no, mekɔkoo bi. Yɛde nkontimmaa a wɔde bɔ baseball ne nnade a yɛmoma so de teɛteɛ yɛn apɔw mu koo denneennen. Afiase ahwɛfo no totow wisaboa tuo (tear gas), na ɛno na wɔde pataa ntɔkwaw no. Ɛno akyi no, afiase ahwɛfo no de me kɔɔ baabi a nneduafo a wɔn ho yɛ hu pa ara da no. Ná me koko nye koraa, na na mepɛ atɛnnidi nso. Ɛreyɛ ara ni na mereboro nkurɔfo. Nokwasɛm ne sɛ, na m’ani gye ho pa ara. Ná minnu me ho koraa wɔ nea na meyɛ no ho.
Bere a wɔde me kɔtoo baabi a nneduafo a wɔn suban nye koraa da no, ɛkame ayɛ sɛ na wɔmma mimpue mmfi dan mu. Enti, mifii ase de saa bere no kenkan Bible. Akyiri yi, afiasehwɛfo bi maa me Wubetumi Atra Ase Daa wɔ Paradise wɔ Asase So * nhoma no bi. Bere a mekenkan saa nhoma a yɛde sua Bible no, mekaee nneɛma pii a misuae wɔ me mmofraase bere a na me ne Adansefo no sua Bible no. Ɛno akyi no, midwinnwen nea me subammɔne no de me akowie no ho. Midwinnwen m’abusua nso ho. Ná me nuabeanom mmienu abɛyɛ Yehowa Adansefo, enti ɛbaa me tirim sɛ, ‘Wɔbɛtena ase daa.’ Afei mibisaa me ho sɛ, ‘Me nso, dɛn na esiw me kwan?’ Saa bere no na meyɛɛ m’adwene pa ara sɛ mɛsakra.
Nanso, mihui sɛ na mehia mmoa ansa na matumi asakra. Enti, midii kan bɔɔ mpae srɛɛ Yehowa Nyankopɔn sɛ ɔmmoa me. Ɛno akyi no, mekyerɛw Yehowa Adansefo baa dwumadibea a ɛwɔ United States srɛe sɛ wɔne me mmesua Bible. Baa dwumadibea no ne asafo bi a ɛbɛn baabi a na mewɔ no yɛɛ nhyehyɛe sɛ wɔmmra me nkyɛn. Saa bere no, na wɔmma nkurɔfo a wɔnyɛ m’abusuafo mmɛsra me. Enti, Ɔdansefo bi a ɔwɔ saa asafo no mu fii ase kyerɛw me nkrataa de hyɛɛ me nkuran, na ɔbrɛɛ me Bible ho nhoma. Ná mayɛ m’adwene sɛ mɛsakra, na wei na ɛboaa me pa ara ma meyɛɛ saa.
Mituu anammɔn kɛse bi. Ná me ne basabasayɛfo kuw no abɔ mfe pii, na meyɛɛ m’adwene sɛ mɛtwe me ho afi wɔn ho. Ná nea odi basabasayɛfo kuw no anim nso da baabi a nneduafo a wɔn suban nye koraa da no, enti bere bi a na yɛregye yɛn ahome no, mekɔɔ ne nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ mepɛ sɛ mebɛyɛ Yehowa Dansefo. Ɛyɛɛ me nwonwa sɛ ɔkaa sɛ: “Sɛ w’ani abere pa ara, ɛnde kɔ so. Merentumi ne Onyankopɔn nni asi. Nanso, sɛ twe araa na wopɛ sɛ wotwe wo ho fi kuw no ho a, ɛnde wunim nea ɛbɛto wo.”
Mfe mmienu a edi hɔ no, afiase ahwɛfo no hui sɛ me suban asesa. Ɛno nti, wɔne me dii no yiye. Ebi ne sɛ, sɛ awɛmfo no de me rekɔ ama makoguare a, na wɔmfa aban nkawa ngu me bio. Awɛmfo no mu baako mpo baa me nkyɛn bɛhyɛɛ me nkuran sɛ, nsakrae a mereyɛ no, menkɔ so nyɛ. Nokwasɛm ne sɛ, aka afe baako ama wɔayi me afi afiase no, afiase ahwɛfo no yii me kɔɔ afiase no fã bi a ɛhɔ de, awɛmfo no mfa wɔn ani nni yɛn akyi pii. Afe 2004, bere a na mada afiase mfe du no, woyii me, na wɔde me tenaa nneduafo bɔs mu twaa me asu kɔɔ Mexico.
Miduu Mexico no, ankyɛ na mihuu Yehowa Adansefo Ahenni Asa. Ɛda a edi kan a mekɔɔ asafo nhyiam no, na mehyɛ nneduafo atade; ɛno nko ara ne atade a ɛfata a na mewɔ. Ɛmfa ho sɛnea na m’ahosiesie te no, Adansefo no gyee me fɛw so. Ayamye a wɔdaa no adi kyerɛɛ me no ma mihui sɛ mewɔ nokware Kristofo mu. (Yohane 13:35) Saa nhyiam no ase na asafo mu mpanyimfo no yɛɛ nhyehyɛe sɛ wɔne me nsua Bible. Afe baako akyi, September 3, 2005 no, wɔbɔɔ me asu ma mebɛyɛɛ Yehowa Dansefo.
January 2007 no, mifii ase yɛɛ bere nyinaa som adwuma. Bosome biara, mede nnɔnhwerew 70 kɔkyerɛkyerɛ nkurɔfo Bible. Afe 2011 no, miwiee Bible Sukuu a Wɔyɛ Ma Anuanom Mmarima Asigyafo (seesei wɔfrɛ no Ahenni Asɛmpakafo Sukuu). Saa sukuu yi boaa me pa ara ma mitumi yɛɛ adwuma a wɔde maa me wɔ asafo no mu.
Seesei ɛyɛ me anigye sɛ merekyerɛkyerɛ nkurɔfo sɛ wɔne afoforo ntena asomdwoe mu
Afe 2013 no, mewaree me yere a medɔ no; ne din de Pilar. Ɛyɛ a ɔde yɛ aseresɛm ka sɛ, sɛ meka ɔbra a na mewom kyerɛ no a, onnye nni. Nneɛma bɔne a na meyɛ no, mensan nkɔɔ ho bio da. Me ne me yere nyinaa gye di sɛ, sɛnea mete nnɛ no yɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ Bible tumi sesa nnipa.—Romafo 12:2.
Mihu sɛ asɛm a Yesu kae wɔ Luka 19:10 no fa me ho. Ɔkaa wɔ hɔ sɛ: “Onipa Ba no bae sɛ ɔrebɛhwehwɛ na wagye nea ayera.” Seesei mente nka sɛ mayera. Saa ara nso na minkyinkyin nkɔyɛ nneɛma a ɛbɛhaw nkurɔfo bio. Bible adaworoma, seesei minim nea enti pa ara mete ase, asomdwoe wɔ me ne afoforo ntam, na nea ɛsen ne nyinaa no, me ne me Bɔfo Yehowa wɔ abusuabɔ pa.
^ nky. 13 Yehowa Adansefo na wotintim saa nhoma yi, nanso seesei wɔagyae tintim. Seesei nhoma a wɔne nkurɔfo de sua Bible pa ara ne Dɛn na Yebetumi Asua Afi Bible Mu?
Onyankopɔn bu nsɛmmɔnedi sɛn? Nsɛmmɔnedifo bɛtumi asesa?
Sɛnea Wobɛdi W’abufuo So
Akwan nnum a wobɛfa so adi w’abufuo so.
Ná Me Koko Nye Koraa